'नेपाल ल्याण्डलक्ड होइन ल्याण्डलिङ्कड देश बन्छ' हिरण्यलाल श्रेष्ठ
पंकज धामी शुक्रवार, आश्विन २४, २०७६, १२:५४:०० मा प्रकाशित
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ शनिबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । २३ वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ उच्च पदस्था अधिकारीको भ्रमणले दिने सन्देश, भ्रमणपछि दुई देशले पाउने लाभ के हुन सक्छन ?
यहि विषयमा परराष्ट्रविद तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उचाइमा उठाउनका लागि महत्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय शान्ति सहयोगको वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।
चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको माहोल हो । अबको १५÷२० वर्षमा विश्वकै पहिलो शक्तिकेन्द्रका रुपमा उदाउन सक्ने मुलुक हो चीन । यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पनि छ । शान्ति र समृद्धि विश्वका लागि यो महत्वपूर्ण छ ।
नेपालका लागि २३ वर्षको इतिहासपछि राष्ट्रपति स्तरमा हुन लागेको यो भ्रमण झनै महत्वपूर्ण छ । चीन भनेको नेपालका लागि वैकल्पिक बाटो दिने राष्ट्र हो । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएपनि नेपालले चीनको बाटो प्रयोग गरेर समुद्रसम्म आफ्नो बाटो बनाउन सक्छ ।
नेपालमा अरुले नाकाबन्दी लगाउने हिम्मत कसैले गर्न सक्दैन किनकी अब हामीले तेस्रो मुलुक जाने बाटो पाएका छौँ ।
अब भुपरिवेष्ठित देश ल्याण्डलक्ड होइन ल्याण्डलिङ्क देश भएर जान्छ । यसका लागि चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण र त्यसपछि हुने सम्झौता महत्वपूर्ण छ । यसले नेपाललाई एउटा नयाँ चरणमा पु¥याउँछ । त्यो अत्यन्तै दुरगामी महत्वको रहन्छ । यसको साथै चीन भनेको हाम्रो वैकल्पिक सहायतको देश हो । पर्यटकीय हिसाबले पनि चीन दोस्रो स्थानमा छ । चिनबाट दोस्रो ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपालमा आउँछन् । नेपालले गतिलो गृहकार्य गरेर उहाँको भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउन तयारी गर्नु आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउँछौँ ?
आफ्नो छिमेकीलाई प्रथामिकता दिने नीति नेपाल र चीनको छ । सँगसँगै सहयोग गरेर जाने भन्ने उसको नीति छ । तिब्बतसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ । तिब्बतको एस्पोर्ट र इम्पोर्ट गर्ने ठाउँ भनेकै नेपाल हो । त्यसैले तिब्बको समृद्धिमा नेपालको सम्बन्धले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसको ठूलो महत्व रहन्छ । बहुआयामिक सम्बन्ध छ ।
२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रको भ्रमण कसरी सम्भव भयो ?
दुई वटा कारण छ । एउटा दक्षिण एसियाका अरु देशहरुमा चीनका राष्ट्रप्रमुख गएको अवस्था हो, हाम्रो आएका छैनन् । लामो समय भयो । यो भ्रमण आवश्यक थियो । दुई छिमेकी बिचको उच्च स्तरीय भ्रमणको महत्व रहन्छ ।
अर्को दुई छिमेकी भारत र चीन हाम्रो नजिकका छिमेकी हुन् । यी दुबैले हामीलाई छाडेभने हामीलाई गाह्रो हुन्छ । तर अहिले दुवै देशसँग सम्बन्ध राम्रो भएको छ ।
भारतीय व्यापारको साझोदार चीन हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको गृहनगर गुजरातको मुहार फेरेको चीनले हो । अहिले पनि भारतमा चीनको ठूलो लगानी छ ।
अमेरिकाले व्यापार युद्ध ‘ट्रेड वार’ गरिरहेको छ । जसका कारण विश्वका अन्य शक्तिशाली देशले अफ्ठ्यारो झेल्नुपरेको छ । त्यसैले यी देशहरुले एक आपसमा मिलेर व्यापार युद्धलाई सामना गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् ।
केही समयअघि मात्रै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गए । चिनियाँ राष्ट्रपति भारत घुमेर नेपाल आउँदैछन् । यसरी दक्षिण एसियाली देशहरुमा चीनले भेटघाट तिव्र बनाएको छ । यसलाई कसरी लिने ?
चीनको जमिन जोडिएको छिमेकी देशहरुमा सार्क भित्रको पाँच वटा देश पर्छ । दक्षिण एसियाको शान्ति सुरक्षामा चीनको पनि चासो रहन्छ । किनकी नेपालको भारत र चीनसँग मात्रै सीमा जोडिएको छ । तर चीनको दक्षिण एसियाकै पाँच वटा देशहरुसँग सीमा जोडिएको छ । र अहिले पाकिस्तानसँग उसको विशेष सम्बन्ध छ । यसर्थ जम्मू कश्मिर विवादलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न चीनले भूमिका खेल्छ । केही समयपछि यो शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका समयमा कस्ता विषयहरुमा सम्झौता हुनुपर्छ ?
पहिलो कुरा कनेक्टिभिटी नै हो । कनेक्टिभिटीमा खुसी लाग्ने कुरा के छ भने चीनले रेल ल्याउने भनेपछि भारतलाई पनि मनमा प¥यो । उसले चीनले भन्दा चाँडै ल्याउँछु भनेर काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।
कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा पनि दुई देशको प्रतिस्पर्धा भइसकेको छ । अबको १५÷२० वर्षभित्रमा दुवै देशबाट नेपालमा रेल भित्रिन्छ ।
नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी भयो भने के हुन्छ ?
यो दुवै देशका लागि फाइदाको कुरा हो । तिब्बती शरणार्थीलाई के अमेरिका जाउ, के अरु देश जाउ के तिब्बत जाउ भनेर छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकी यिनीहरु चीनको पक्षमा पनि छैनन् । नेपालको पक्षमा पनि छैनन् । चीनले नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने पनि चाहान्छ ।
अनि भेटघाट कसैको मुख हेर्नलाई हुने होइन यो महत्वपूर्ण भेटघाटलाई एउटा ऐतिहासिक बनाउनुपर्छ । मगन्ते हिसाबले सानातिना कुरा माग्ने होइन । छलफल गरेर एउटा गतिलो समझदारी बनाउनुपर्छ । यो कोशिस जारी राख्नु पर्छ ।
योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ, मसंग ४० वर्षे अनुभव छ शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६, १६:१२:००
जम्मू कश्मीर विवादमा नेपाल मौन रहनुनै उचीतः पूर्व राजदुत उपाध्याय भारत र पाकिस्तानको बीचमा आतंकवादका घटनाहरुले सम्बन्ध विग्रेको थियो । अहिले त्यो चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला हाम्रा पनि केही नैतिक मूल्यमान्यताहरु छन् । शुक्रवार, श्रावण २४, २०७६, २३:४६:००
सोमबारको सचिवालयले टुंगो लगाउला पोलिटब्युरो ? आइतवार, जेठ १९, २०७६, १२:५४:००